प्रहरीभित्र यसरी सुरु गरे गृहमन्त्री शर्माले हस्तक्षेप, कहाँ राख्ने ११ एआइजी ? | NepalDainik
प्रहरीभित्र यसरी सुरु गरे गृहमन्त्री शर्माले हस्तक्षेप, कहाँ राख्ने ११ एआइजी ?
प्रहरीमा कुनै पनि पद थप गर्दा व्यवस्थापन तथा संगठन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आवश्यकताअनुसार मात्र दरबन्दी थप गर्न प्रहरी नियमावलीमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । तर, व्यवस्थापन तथा संगठन सर्वेक्षण नगरी सरकारले ठाडो प्रस्तावका आधारमा प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी थपेको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
साथै, एआइजी बढुवा सिफारिस समितिका संयोजक गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी विदेश भ्रमणमा गएकाले पनि बढुवा केही दिन रोकिने भएको छ । सार्क गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन गृहमन्त्री जनार्दन शर्मासहित गृहसचिव रेग्मी मंगलबार श्रीलंका भ्रमणमा निस्किएका छन् । अब उनी फर्किएपछि मात्र बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।
Posted by Becoming Kishor at 7:00 PM
No Comment to " प्रहरीभित्र यसरी सुरु गरे गृहमन्त्री शर्माले हस्तक्षेप, कहाँ राख्ने ११ एआइजी ? "